Torah am-bava - Wikipedia
Ny Torah am-bava, izay atao amin' ny teny hebreo hoe תורה שבעל פה / Torah SheBe'al Pe ("Lalàna am-bava"), dia ny foto-pampianarana sy ny tahirin-dahateny niaraka amin' ny Torah izay nampitaina am-bava tao amin' ny fivavahana jiosy, sady fanampin' ny תורה שבכתב / Torah she-bi-khtav ("Lalàna voasoratra"), ny Torah voasoratra, sady tsy afa-misaraka aminy sady efa niaraka aminy hatramin' ny nanambaràn' Andriamanitra azy tany amboalohany.
Ny Torah am-bava dia tokony tsy hivaona amin' ny endriny tamin' ny nanolorana azy tany Sinay (na Sinaia), ka noho izany dia mila mpamerimberina (hebreo: תנאים / Tannaim) izay mampita ny fampianarana izay mamerina ny teny nampitana azy hatramin' ny voalohany, nefa mivoatra ihany koa ny fivoasana azy izay tokony hifanaraka amin' ny zava-misy isan-taranaka. Noho izany dia manana heviny tsy efa isaina, izay samy nampitain' Andriamanitra amin' i Mosesy (na Môizy), ny Torah voasoratra, nefa ny vitsy amin' ireo ihany no nambara tamin' ny olombelona.
Am-bava tokoa io lovantsofina io tamboalohany, nefa taty aoriana dia nampandrina an-tsoratra amin' ny ampahany izy ireo tamin' ny taonjato voalohany ao amin' ny Midrasa (hebreo: מִדְרָשׁ / Midrash) sy ny Misna (hebreo: משנה / Mishna) ary ao amin' ny Talmoda (hebreo: תַּלְמוּד / Talmud) sy ny Fifamaliana (hebreo: שאלות ותשובות / She'elot uTeshuvot) ary ny asa soratry ny Raby taty aoriana.
1 Fanorenana ara-tsoratra masina ny Torah am-bava
2 Ny Mishnah sy ny Gemarà
2.1 Ny Mishnah
2.2 Ny Gemarà
Fanorenana ara-tsoratra masina ny Torah am-bava[hanova | hanova ny fango]
Araka an' i Hazal, ny Torah am-bava dia nomena tao amin' ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia), araka ny voalazan' ny Torah, indrindra ao amin' ny Bokin' ny Eksodosy ("Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Miakara eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto, dia homeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna [torah] sy ny didy [mitzva], izay nosoratako hampianarina azy.." -- Eks 24.12) izay hazavainy toy izao: ny "vato fisaka" dia ny Didy folo, ny "didy" dia ny Mishna, ny "lalàna" dia ny Torah, ny hoe "izay nosoratako" dia manondro ny Nevi'im sy ny Ketuvim, ny hoe "hampianarina azy" dia manondro ny Gemarà (Talmodan' i Babilôna, Berakhot 5a).
Ao amin' ny Kuzari (3.25), i Juda Halevi dia mampianatra fa zavatra tsy afaka nitranga ny fampitana ny Torah tamin' ny alalan' ny soratra irery ihany, satria maro ny mitzvot izay voantondro nefa tsy misy fanazavana, ka raha tsy nisy ny fampitana am-bava dia honanakasaka ny fampiharana azy, nefa tsy mifanaraka amin' ny maha tongalafatra azy izany.
Ao amin' ny teny fampidirana nataony amin' ny Mishneh Torah dia napahatsiahy fampianarana rabinika iray hafa, izay manatsoaka avy ao amin' ny Levitikosy 26.46, i Mosesy Maimônida (na Rambam), fa nisy Lalàna roa, ka ny iray natokotra ny mpisorona ho soratana (Deoteronomia 31.9) ary ny iray hafa nampitana am-bava tamin' ireo Olon-kendry sy tamin' ny vahoaka. Nofaritan' i Maimônida ireo zavatra telo mamorona ny Torah am-bava:
ny ampahany voalohany dia niampita am-bava, izany dia ny Torah Shebe'al Pe, amin' ny heviny tery, izay nampitaina araka ny halakha rabanita, tamin' ny alalan' i Mosesy izay nandray tamin' ny fotoana mitovy amin' ny nandraisana ny Torah voasoratra. Ireo fampianarana ireo dia ahitana didy izay lazain' ny Rabanima fa Halakha leMoshe miSinaï ("Fitsipik' i Mosesy tao ambonin' i Sinay"), izay mety mifanandrify na tsia amin' ny Sotatra.
ny faharoa dia notsoahana avy amin' ny Soratra tamin' ny alalan' ireo fitsipika hermeneotika talmodika; ireo lalàna avy amin' io fomba fiasa io, izay antsoina hoe Midrash Torah, dia mety miteraka tsy fitovian-kevitra teo amin' ny Raby.
ny fahatelo dia nampidirina mba "hanaovana sakana manodidina ny Torah", izany hoe fitandremana fanampiny, izay manamafy ny zavatra andraràna na manafoana ireo zavatra azo atao, mba tsy hahatonga ny olona hanao fandikan-dallàna.
Araka an' i Adin Steinsaltz, ny lovantsofina am-bava dia "tafiditra tsotra izao ao amin' ny fampitana ny hevitry ny teny", dia ireo teny mahalana izay ilana fanazavana fanampiny. Nivoatra sy nihamaro tsipiriany izany taty aoriana, ka nanazava ireo fomba fanaon' ny vahoaka, sady nivoatra tamin' ny alalan' ny fomba famakafakana sy ny fanampiana zavatra raràna hafa.
Na dia manamafy aza ny Olon-kendry fariseo fa ireo fandaharana ireo dia mi derabbanan fa tsy mi deOraïta, nisy ireo mpomba ny "soratra irery ihany" toy ny Sadoseo (na Sadoseana) tamin' ny andron' ny Tempoly Faharoa na ny Karaita tamin' ny Andro Antenatenany, izay niampanga azy ireo ho tsy manaja izay andidian' ny Deoterônômy (Deo 4.1-2) ny amin' ny tsy tokony hanampiana na hanesoarana na inona na inona amin' ny Lalàna. Tsy manaiky ny Torah am-bava koa ny Eseniana sy ny Samaritana.
Ny Mishnah sy ny Gemarà[hanova | hanova ny fango]
Ny Mishnah[hanova | hanova ny fango]
Ny Mishnah dia ny fanangonan-dalàna am-bava jiosy voalohany sady literatiora rabinika voalohany nanomboka tamin' ny taonjato faha-3 taor. J.K., izay mitanisa ireo hevitra sy ady hevitra ary koa ny famahana ara-dalàna nataon' ny Tanaima (hebreo: תנאים / Tanaim "mpamerimberina") momba ny zavatra andidian' ny Torah, ka alahatra araka ny lohahevitra, misy toko enina sady voatsinjara ho lohahevitra miisa 63.
Ny Gemarà[hanova | hanova ny fango]
Ny Gemarà dia fivoasana sy fanaovana hevi-teny isan' ny mamorona ny Talmoda, dia ny Talmodan' i Babilôna sy ny Talmodan' i Jerosalema. Ny Mishnah sy ny Gemarà no mitambatra ka mamorona ny Talmoda. Ny Gemaràn' ny Talmodan' i Babilôna dia nosoratana tamin' ny fiteny arameana atsinanana fa ny Gemaràn' ny Talmodan' i Jerosalema kosa dia nosoratana tamin' ny fiteny arameana andrefana. Ny Gemaràn'ny Talmodan'i Babilona no feno sy voalamina indrindra. Ny Gemarà dia ahitana ireo ady hevitra sy ny fanazavana ary ny famelabelarana ny Misnà, izay mampifandray azy mazava kokoa amin'ny Tanakh.
↑ "Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Miakara eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto, dia homeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy, izay nosoratako hampianarina azy." (Eks 24.12, Ny Baiboly)
↑ "1 Ary ankehitriny, ry Israely, henoy ny didy amam-pitsipika atoroko, hitandremanareo azy mba ho velona hianareo, ka hiditra sy hanana ny tany nomen' ny Tompo Andriamanitry ny razanareo anareo. 2 Aza manampy izay andidiako anareo, na manala amin' izany akory, fa tandremo ny didin' ny Tompo Andriamanitrareo, izay andidiako anareo." (Deo 4.1-2, Ny Baiboly Masina)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Torah_am-bava&oldid=1013537"
Voaova farany tamin'ny 10 Aogositra 2021 amin'ny 10:03 ity pejy ity.